Unxiba njani nge-Smart-Iingcebiso kumadoda aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Unxiba njani ngokundilisekileyo
Ukunxiba ngobuhle luphawu lwesazisi, Kukunxiba iimpahla ezifanelekileyo ezisinika umbono wokuba sinxibe kakuhle kwaye sinencasa. Ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukhe wafuna ukufumanisa ukuba isihlandlo siba sihle kwaye ubungazi ukudibanisa ezinye iimpahla. Kungenxa yoko le nto kumanqaku anje unokufumana ezinye zeempendulo zakho.
Kumadoda aneSimbo esinaso izimvo zokuthandabuza okuncinci, ukuze wazi ukwahlula eyakho ingcinga yokunxiba ezinye iimpahla nabanye, wazi ukuba uyikhathalela njani inkangeleko yakho kwaye uyenze icace into ekufuneka uyithengile kunye nento onokubheja kuyo.
1 Ungathenga njani ngokufanelekileyo?
2 Iingcebiso ezisisiseko ngengubo entle
3 Khetha iimpahla zakho ngobuhle
Ungathenga njani ngokufanelekileyo?
Ukuba ukhetho lwakho kukuba nempahla entle kwigunjana lakho, kuya kufuneka wazi ukuba ukukhetha isambatho esifanelekileyo akuthengi iipolo, iihempe kunye nee-chinos ngobuninzi. Kwindawo yokugcina izinto akufuneki ilahleke iziqwenga ezibalulekileyo ezinjengeMelika okanye iisuti zizonke.
Ungalibali ukuba neempahla ezintle oko akuthethi ukuhlala uthenga iimpahla ezintsha, okanye bathenge iimpahla ezinophawu olunempawu zazo, okanye banxibe amaqhina ngoluhlobo, okanye batyale isuti nangayiphi na indlela.
Amanyathelo okuqala okunxiba smart kukwazi yeyiphi indlela yokuphila onayo kwaye luhlobo luni lwempahla oyifunayo ngesihlandlo ngasinye. Ukuhamba uhambo akufani nokuya kumnyhadala obalulekileyo, lonke ixesha kunye nomzuzu ngamnye ubalulekile kwaye ukhetha nengubo elungileyo nayo.
Xa uthenga kufuneka ujonge iimpahla ezihambelana nomzimba wakho kunye nokuthanda kwakho. Kuya kufuneka uwazi kakuhle umzimba wakho kwaye wazi ngeempawu zakho ukuba yeyiphi impahla ekufaneleyo. Siyazi ukuba kukho izambatho, ngenxa yobume bazo kunye noyilo, azifani kumntu omfutshane okanye omde okanye ngombala oqinileyo okanye obhityileyo, yiyo loo nto kufuneka uyazi ukuba ukhetha njani ngokuzinikela.
Iingcebiso ezisisiseko ngengubo entle
Ayidinisi okanye iklasikhi ukukhetha iimpahla ezisisiseko. Ayifani nokudinwa kodwa endaweni yoko sisiqinisekiso esincinci sokungazenzi iimpazamo kwaye uyakuhlala unayo loo ngubo ilingane nayo nayiphi na enye.
Xa ukhetha imibala ungahlala uhlala ukubheja kwimibala yakudalas: luhlaza, grey, beige, brown, mnyama namhlophe. Ukuba kunokwenzeka, ukubheja kwimibala engacacanga kakhulu, kuba uya kuba nempumelelo ngakumbi ngemibala ethambileyo kunye nengcathu.
Soloko uthenga iimpahla ezilingana nawe. Kuyimpazamo ukubona ukuba le ngubo ibanzi okanye incinci kakhulu. Ukuba awunakho ukukhetha ukuthenga ubungakanani bakho kwaye bukhulu kakhulu, qaphela ukuba unokukhetha ukwenza amalungiselelo amancinci ngoncedo lomnxibi.
Ukuthenga iimpahla ezisefashini lukhetho olufanelekileyo, kodwa bona ukuba ingajongeka intle kuwe, kuba wonke umntu akanayo ingubo efanayo okanye enye. Kufanelekile ukuba ilingane nobuntu bakho kunye nezinto ozithandayo, kuba ukuba iphume kwitune inokungonwabi kuwe.
Khetha iimpahla zakho ngobuhle
Kukho iimpahla ezisisiseko ezingenakuphulukana nekhabhathi yakho, njengoko besitshilo, kubalulekile ukuba ukhethe iimpahla zakudala ezinemibala ethambileyo engaphumiyo kwisitayile:
Sukuyeka ukuthenga iihempe ezimhlophe Bahlala besebenza kakuhle kakhulu kunxibe okwexeshana kunye nobuhle. Ukuba ukhetha ukukhetha umbala onombala othambileyo, ngaphandle komzobo okanye ipateni. Ukuqaqambisa kukuba ihempe kufuneka ihlale i-ayinwe kakuhle, luhlobo lobuhle.
Ukuba banokuhlala behamba ibhulukhwe ngaphakathi kunye nemikhono emide. Ukuba ukhetha ihempe ekufuneka inxitywe ngaphandle, qiniseka ukuba iqinile kwaye ayigqumi umphambili okanye umva weepokotho.
Iibhulukhwe zeChino zezona zisetyenziswa kakhulu kuba zidibanisa ngendlela entle nenqabileyo. Ziluphawu lokunxiba kakuhle nangobukhazikhazi, zinokuguquguquka kwaye zijongeka zintle ngeehempe zephepha kunye neehempe ezibekwe ngaphakathi. Imibala onokubheja kuyo yimibala efudumeleyo, nangona ungeke uyeke ukuba nombala oluhlaza waselwandle.
Ukuba ukhetha ukunxiba ijini, kuya kufuneka sikuxelele ukuba nazo zintle, ukuba kunokwenzeka zincinci kwaye zinombala omnye omnyama oqinileyo. Ijeans ezikrazukileyo, ezigugileyo okanye ezinama-rivets amaninzi okanye imihombiso ayilunganga.
Iidyasi zonxiba ziyintoni banika olona phawu lubalaseleyo lobuhle. Ibhatyi yesuti zezona zibheja kakhulu kwaye eyona mibala ikhethiweyo isuka kwimibala emnyama enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza okwesibhakabhaka.
Uhlobo lwe-blazer banengoma ethe kratya yanamhlanje kunye nemidlalo, kodwa zisesitayile kwaye zihamba ngokugqibeleleyo ngeebhulukhwe kunye neebhulukhwe ezinombala. Ilaphu kunye nokugqitywa kokugqibela kolu hlobo lwebhatyi kukwixesha lobukhazikhazi obukhulu elinikwa zezi mpahla. Soloko kufuneka ubheje ezo ndwangu zingashwabani ngokulula kwaye uhlala ubonakala ungenasiphako.
Ukubheja kwizihlangu zokunxiba yeyona ndlela ifanelekileyo. Ngaba ii-loafers, ii-loafers okanye izihlangu ezinamakhonkco kwaye ukuba zimdaka okanye zimdaka ziya kuhlala ziyindlela elungileyo. Akucetyiswa ukuba unxibe iiteki, nangona sele kukho ezinye iimveliso kunye neemodeli kwindawo yentengiso enika olo thintelo lobuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Unxiba njani ngokundilisekileyo
Ezona moto zibalaseleyo emhlabeni